यि हुन् थाहा गोल्डकपको २७ पुसको विजयी टिम
आयोजक (ए) र विसिङ्खेल विजयी
विनयबाबु पालुङ विजयी
थाहा गोल्डकप अन्तर्गत २७ पुसमा भएको खेलमा विनयबाबु स्मृति प्रतिष्ठान विजयी भएको छ । विनयबाबुले न्युरेनी युवा क्लब हेटौंडालाई १–० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो ।
इन्द्रसरोवर र जे.सी.आई नौबिसे विजयी
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र जे.सी.आइ. नौबिसे विजयी भएको छ । इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले दिपशिखा नैकापलाई ३–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो भने जे.सी.आइं. नौबिसेले बागवत्सला धादिङलाई ट्राइबेकर मार्फत ३–२ गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो ।